Coronavirus ကိုတိုက်ထုတ်ရန်အီတလီမြို့တော်ဝန်ကမီးသတ်သမားများစေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 26 2020 အပေါ်	• 14 မှတ်ချက်
နိုင်ငံရေးနှင့်မီဒီယာများမှတဆင့်ပြန့်နှံ့နေသောစစ်အစိုးရ၏စစ်မှန်သောမျက်နှာကဘာလဲ ထိန်းချုပ်အတိုက်အခံ? သက်တံသင်္ကေတကိုသတိပြုပါ။ သက်တံဟာလျှို့ဝှက်စွာကမ္ဘာသစ်ရဲ့သင်္ကေတလား။ ကမ္ဘာကြီးသည်နော time ခေတ်ကကဲ့သို့သော Corona ဒီရေလှိုင်းကြီးနှင့်အတူရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလော။ ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ သက်တံလား
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုစာသားအတိုင်းမယူသင့်ဟုထင်နေဆဲဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စာသားအတိုင်းဖြစ်သွားလျှင်ကော။ ဒီမြို့တော်ဝန်ရဲ့ခံတွင်းထဲကလာတဲ့ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ဘာသာစကားကိုကြည့်ပါ။ ၀ န်ကြီး Grapperhous သည် coronavirus ကိုစတင်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသဖြင့်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းနားမထောင်ဘူး၊
သငျသညျသတိရ Do ဒီသတိပေးချက် ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာကနေလား
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိကျွန်ုပ်စာအုပ်နှင့်ဆောင်းပါးများစွာ (အခမဲ့ဖတ်လို့ရသော) တွင်သက်တံသည်ကမ္ဘာသစ်၏ဘုရားသခင်သင်္ကေတဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည် - လူစီဖာ။ ကမ္ဘာသစ်အစီအစဉ်သည်လူစီဖာပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီကမ္ဘာကြီးကိုကြိုးပမ်းသည်။ လူစီဖာအတွက်သင်္ကေတသည် Baphomet ဖြစ်သည်။ hermaphrodite (androgynous သို့မဟုတ် 'gender neutral') chimera buck (ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ chimerism ) ဖြစ်ပါသည်။
“ သူ့ကိုငါရပ်ပြီးကြည့်လိုက်၊ ဒါကရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ ငါ Leg Am ထဲမှာမင်း Will Smith မဟုတ်ဘူး။ အိမ်ပြန်ကြပါ ဦး ဟုဆို၏။
ဤသည်မှာအီတလီမြို့တော်ဝန်များမှချိုးဖောက်သောသူများကိုဆုံးရှုံးစေသည့်နောက်ဆုံးအချက်အလက်များဖြစ်သည် # Covid19 quarantine ။ ဟုတ်တယ်၊ စာတန်းထိုးတွေကတိကျတယ်။ pic.twitter.com/60V4Csuonb
- 🌈 (@protectheflames) မတ်လ 22, 2020
Vincenzo De Luca၊ အီတလီမြို့တော် Campania ၏မြို့တော်ဝန်
Dean Koontz မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ The Eyes of Darkness စာအုပ်မှ Wuhan-2016 virus bioweapon အကြောင်းပြောထားသည်
Trump, Q-Anon နှင့် 'deepstate clean up' ဒဏ္myာရီ (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Coronavirus covid-19 lockdown update: သင်နိုးလာတယ်၊ ပိတ်မိနေပြီဆိုတာသိတဲ့အခါဘာလုပ်နိုင်လဲ။
Tags:: မြို့တော်ဝန်, coronavirus, de, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အီတလီ, အီတလီ, Lucas, ကာကွယ်သည်, သက်တံ, မိုးစက်, အ, Vincenzo, မီးတောက်
26 မှမတ်လ 2020 10: 26
ငါတို့ယခုအချိန်ရောက်နေပြီလား။ ဗီဒီယိုထဲမှာမိနစ် ၃း၁၇
26 မှမတ်လ 2020 23: 49
နံနက် ၃:၃၀ နာရီမှာ Corvid ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ရောဂါခံစားနေရမယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကခြိမ်းခြောက်တဲ့အခါငါထင်တယ်။
26 မှမတ်လ 2020 11: 30
ဗီဒီယိုဂိမ်းအချို့ကစားပါဟုဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတ ဦး ကပြောကြားသည်။
WHO အပါအ ၀ င်အချို့ပညာရှင်များကယခုအခါ“ ဂိမ်းများ” အားတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့်virtualရာမလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်လာမှုနှင့်အတူသူတို့၏, ည့်ခန်းရှိလူများသည်အတုအယောင်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာကြီးဟာတကယ့်အရာကနေခွဲခြားလို့မရတဲ့ရွေ့လျားမှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့အစီအစဉ်များကိုပင်လျှင်ကလေးများအား virtual world များမှတဆင့်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ သို့မှသာနောင်အနာဂတ်တွင်သူတို့သည်ကျောင်းသို့အမှန်တကယ်သွားရန်မလိုတော့ဘဲအမှန်တကယ်သင်ကြားခြင်းမရှိသောလက်တွေ့ဆရာမှအခြားကလေးများနှင့်သင်ခန်းစာယူနိုင်မည့်“ virtual စာသင်ခန်း” သို့သွားနိုင်သည်။ ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာအမြဲတမ်းအထီးကျန်နေရတော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကဆက်ပြီးပေါ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်မှန်နဲ့ဒီဟာကပြthisနာမရှိပါဘူး၊ လူတွေကအပြင်မှာသွားမနေချင်ကြဘူး၊ သူတို့အစစ်အမှန်အရာကနေအားလုံးမှာခွဲခြားလို့မရပါဘူးတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ Transhumanism ကိုဒီ lockdowns လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အလွန်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးပြီးမကြာခင်မှာပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်လာပြီးပိုပြီးအဆင့်မြင့်လာလိမ့်မယ်။
26 မှမတ်လ 2020 12: 03
ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဝံတွေကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာအခုသင်ပေးတယ်။ ထိုဝက်ဝံများကို 'ခြိမ်းခြောက်သောအရာများ' ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ထိုအက်ပ်တွင်သင်ဘာမြင်သနည်း။
ဝီလျံက S wrote:
26 မှမတ်လ 2020 13: 00
သူနာပြုများ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အအေးမိသည့်အရေးကြီးသောအလုပ်အကိုင်များရှိသောသူများသည်ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
26 မှမတ်လ 2020 13: 24
နယ်သာလန်ရှိအငြိမ်းစားနေအိမ်အများစုတွင်အချို့သောတံခါးများ၏အပြင်ဘက်တွင် pin code ရှိသည်။ ထိုကိစ္စတွင်အသက်ကြီးသူသည်အတွင်းပိုင်းမှတံခါးကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ ဒါကခေတ်သစ်နည်းပညာပါ။ Coronavirus ကိုသံသယဖြစ်လျှင်တံခါးကိုသော့ခတ်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသူနာပြုအိမ်အနီးတွင်မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းရှိသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကများသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများသည်မသွားနိုင်တော့ပါ။ Lockdown ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့သည်ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်မှီခိုနိုင်ပါတယ်။ သူနာပြု ၀ န်ထမ်းများသည် protocol ကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးရောဂါကူးစက်ခံထားရသောသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုသူတို့၏အခန်းထဲတွင်သိမ်းထားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်ကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် (သို့မဟုတ်သင်ကိုသီးသန့်ထားရန်လိုအပ်သည်) သို့မဟုတ်အခြားသက်ကြီးရွယ်အိုများကူးစက်ခံရနိုင်သည်။ သင်မလိုချင်ပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှပြန်လာသည့်ပုံစံသည်“ coronavirus positive” ဟုတစ်ခါတစ်ရံဆိုတတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများအားပိတ်ဆို့ခြင်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ဟုတ်ကဲ့။ ” ၎င်းသည်ပျော်စရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဓာတ်ခွဲခန်း၏ရလဒ်ကိုမည်သူနှင့်ဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း။ မင်းက protocol ကိုကပ်ထားတယ်…”
ဘယ်လိုဟယ်ရီ Mens တကယ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
26 မှမတ်လ 2020 13: 26
26 မှမတ်လ 2020 15: 39
ကောင်းပြီ, Vincenzo က de Luca ။ တစ်ခုရှိလား။ သူတို့သည်အီတလီရှိအဓိကရာထူးများတွင်လည်းရှိနေသည်။ အရာအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာမှညှိနှိုင်းပြီး Hen ကညွှန်ကြားသည်။ သူတို့ဟာအရာအားလုံးကိုမြင်တယ်၊ အရာအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်တယ်၊ သူတို့ဟာစံသတ်မှတ်ချက်၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊ သူတို့ဟာအားကြီးတဲ့လက်မောင်းတွေဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သာမန်လူများ၊ သူတို့ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားပစ်သနည်း။
26 မှမတ်လ 2020 17: 34
ပထမ ဦး စွာနှစ်များအတွင်းထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောဆောင်းပါးများစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သင်၏အလုပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်သာမကစာအုပ်၏ပါ ၀ င်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းသည်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးဘဝ၏အနှစ်သာရကိုနက်နက်နဲနဲသိမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
26 မှမတ်လ 2020 22: 40
27 မှမတ်လ 2020 07: 09
jhonny မှတစ်ဆင့် link မှတဆင့့်အရေးကြီးသောအပိုင်းအစ။
CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီ RT-PCR စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီး၊ အောက်နှင့်အောက် (အောက်) အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနမူနာများရှိ 2019-nCoV မှနျူကလိစ်အက်ဆစ်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 2019-nCoV လက်တွေ့နှင့် / သို့မဟုတ်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များကိုပြည့်မီသူများမှစုဆောင်းထားသည့် nasopharyngeal သို့မဟုတ် oropharyngeal swab, sputum, အောက်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ aspirates, bronchoalveolar lavage နှင့် nasopharyngeal ဆေးကြောခြင်း / Aspirate သို့မဟုတ်နှာခေါင်း aspirate) (2019- နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။ nCoV ရောဂါကူးစက်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်သို့မဟုတ်အတည်ပြုထားသော 2019-nCoV အမှုနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ 2019-nCoV ဖြစ်ပွားမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောပထဝီနေရာများသို့ခရီးသွားခြင်း၏သမိုင်းကြောင်းသို့မဟုတ် 2019-nCoV စစ်ဆေးခြင်းကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ညွှန်ပြနိုင်သည့်အခြားကပ်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ) ။ ရှုပ်ထွေးသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စစ်ဆေးမှုကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်၏လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတွင်စမ်းသပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းများ (CLIA)၊ USC 1988 USC § 42a ကန့်သတ်သည်။
ရလဒ်များ 2019-nCoV RNA ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ 2019 nCoV RNA သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရောဂါပိုးကူးစက်နေစဉ်အတွင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထက်နှင့်အောက်နမူနာများတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များသည် 2019-nCoV နှင့်တက်ကြွစွာကူးစက်ခြင်းကိုပြသသော်လည်းဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုသို့မဟုတ်အခြားဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်တွဲဖက်ကူးစက်ခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအေးဂျင့်သည်ရောဂါ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပေ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်၎င်း၏နယ်မြေများရှိဓာတ်ခွဲခန်းများသည်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်အားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များထံတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။
အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များသည် 2019-nCoV ရောဂါကူးစက်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ ကုသမှုသို့မဟုတ်လူနာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအနေဖြင့်မသုံးသင့်ပါ။ အပျက်သဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ လူနာ၏သမိုင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုမှအကျိုးမရပါ။ ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမည်သည့်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုသနည်း။ protocol ကို? ၎င်းသည်လူနာများအားဆရာဝန်များဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုသည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တူ၏။ မေးခွန်းမှာလူနာများအနေဖြင့်ဤရောဂါကြောင့်ဖျားနာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆရာဝန်များနှင့်သူနာပြုများသည်အစဉ်အမြဲမျက်နှာဖုံး ၀ တ်ခြင်းမပြုသည်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ထားခြင်းကြောင့်ရောဂါ / ရောဂါကိုအလားအလာရှိသော Corona လူနာများသို့ပင်ကူးစက်နိုင်သည်။ တခါတရံတွင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တွင်အလားအလာရှိသော Corona ရှိနေစဉ်ဆက်လုပ်နိုင်သည် နောက်ဆုံးတွင်လူနာများသည် Corona သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုမှသေဆုံးကြမည်လော။ Cui bono? အတိအကျကမ္ဘာ့တိုးတက်အောင်လူမှုအင်ဂျင်နီယာများ။
27 မှမတ်လ 2020 00: 36
@ martin မက်ဆေ့ခ်ျမှသင်္ကေတများ (မူဘောင်) အပြင်၊ ခေါင်းဆောင်များ (သို့) ဝေဒနာသည်များ၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား၊ မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုလည်းအာရုံစိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်တွင်“ မျက်စိကန်းသောအရာ” ရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးသောအခွင့်အာဏာသည်ဖော်ရွေသူ / နှလုံးသားဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည် (အကြံပြုချက်များအတွက်ကျသည်) ။ မျက်နှာတန်ဖိုး၏စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (persona = mask) သည်သူတို့၏စစ်မှန်သောမျက်နှာကိုပြသသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒီ link ကပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့ဆောင်တွေ၊ သတိမှအသိအမှတ်ပြုမှု။
တစ် ဦး sidenote တွင်: AI သည်အလွန်အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုသို့မဟုတ်လူ့စွမ်းရည်၏မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ဇ) အမှန်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူ၏စစ်မှန်သောဝိသေသလက္ခဏာ (အတွေးအခေါ်) ကိုပြန်လည်မဖော်ထုတ်နိုင်သရွေ့သူသည်ပြင်ပအာဏာပိုင်တစ် ဦး ထံတောင်းခံလိမ့်မည်။
28 မှမတ်လ 2020 07: 33
Gordon Brown က coronavirus ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်
၀ န်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဗဟိုဘဏ်၏ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအကြံပြုခဲ့သည်
ဟုတ်ပါတယ်, ပုံမှန်သံသယရှိသူများ၏အစီအစဉ်ကိုပို။ ပို။ လာမယ့်နေသည်
« Trump, Q-Anon နှင့် 'deepstate clean up' ဒဏ္myာရီ (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
လိင်ကွဲယောက်ျားများသည် coronavirus ၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ပါသလား။ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံ »
ကြီးမားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု - Corona အကျပ်အတည်းပြီးနောက်မည်သည့်ကမ္ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်မည်နည်း။
guppy op Corona အကျပ်အတည်း - အစောပိုင်းခြေရာခံမှုများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ မှလွဲ၍ ပိတ်ဆို့ခံရမှုမှထွက်ရန် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်
ZalmInBlik op Corona အကျပ်အတည်း - အစောပိုင်းခြေရာခံမှုများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ မှလွဲ၍ ပိတ်ဆို့ခံရမှုမှထွက်ရန် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်
မာတင် Vrijland op Corona အကျပ်အတည်း - အစောပိုင်းခြေရာခံမှုများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ မှလွဲ၍ ပိတ်ဆို့ခံရမှုမှထွက်ရန် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်